January 14, 2021 - Padaethar
လူတစ်ယောက်ကို တကယ်ချစ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက် (၁၃) ချက်
January 14, 2021 by Padaethar
သင့်လက်ရှိ အချစ်ရေးက သင့်အတွက်စစ်မှန်တဲ့ အချစ်မဟုတ်သေးဘူးဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချက်များ
လောကကြီးမှာ အချစ်စစ်မှန်ရင် ပျော်ရွှင်မှုတွေချည်းပဲလည်း မဟုတ်ဘူး၊ အဆင်မပြေမှုတွေကိုလည်း မလွဲမသွေကြုံရတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အရာအားလုံး ပြီးပြည့်စုံတာမျိုးတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမယ့် အချစ်ကြောင့် ဘဝကပျော်ရွှင်မှုတွေ ပိုများလာတာမျိုးပဲ ပိုဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အချစ်ကြောင့် စိတ်ညစ်တာ၊ စိတ်ပင်ပန်းတာတွေပိုများနေရင် အဲ့ဒါက အချစ်စစ် မဟုတ်နိုင်ပါဘူးနော်။ (၁) အရာရာ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်နေတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး ချစ်တယ်လို့ ပါးစပ်ကတဖွဖွပြောပေမယ့် လက်တွေ့မှာကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားပေးတာ၊ ကိုယ့်အတွက်မကြည့်တာ၊ တစ်ဖက်ကအမြဲသည်းခံပြီး၊ တစ်ဖက်ကအမြဲအနိုင်ယူနေတာမျိုးကို စစ်မှန်တဲ့အချစ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ အချစ်စစ်ဆိုတာက နှစ်ဖက်မျှတမှု ရှိပါတယ်။ (၂) အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာ အချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး ကိုယ့်ကိုဂရုစိုက်ဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်စဉ်းစားပေးဖို့၊ ကိုယ့်အတွက်ကြည့်ပေးဖို့အောက်ကျို့တောင်းပန်နေရတာမျိုး၊ မလုံခြုံတဲ့စိတ်ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေတာမျိုးက အချစ်စစ် မဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်စစ်က ဂရုစိုက်ဖို့တောင်းဆိုစရာမလို၊ အောက်ကျို့နေစရာမလိုဘဲ၊ လုံခြုံတဲ့ခံစားမှုကို ဖြစ်စေတာမျိုးပါ။ (၃) အမြဲတမ်းငိုကြွေးနေရတာအချစ်စစ်မဟုတ်ဘူး အချစ်ကတခါတရံသင့်ကိုဝမ်းနည်းစေပေမယ့် အမြဲတမ်းတော့ ဝမ်းနည်းစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပျော်ရွှင်ရတာထက် ဝမ်းနည်းရတာကပိုများနေတာ … Read more
မိမိတို့ နေအိမ်ကို လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အချက်များ ဖတ်ထားသင့်တယ်နော်
မိမိတို့ နေအိမ်ကို လာဘ်ပိတ်စေတတ်သော အချက်များ ဖတ်ထားသင့်တယ်နော် ကလေး လူကြီး လူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့အရာတွေပါ။ဖတ်ဖို့မအားရင် Share ပြီး သိမ်းထားပါ။သိသူကျော်သွားပါရန်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ “လူ့ဘဝမှာ စီးပွားလာဘ်လာဘ ပွင့်လန်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ စီးပွားလာဘ်လာတွေ ပိတ်ဆို့နေမယ်ဆိုရင် …. အဲ့ဒီ့အိမ်ဟာ သီရိမင်္ဂလာမရှိတော့ပါဘူး။ အမင်္ဂလာအိမ်ပဲ ဖြစ်တော့မယ်။ “ဒီတော့ ဒါတွေရှောင်ပါ….. ၁။ မီးဖို အား စလောင်းဖုံးအုပ်ခြင်း ၂။ အိမ် ထောင်ဦးစီး လင်ယောင်္ကျားအား နိမ့်ကျသော နေရာတွင်ထားခြင်း ၃။ မိမိ ဇနီးသည်အား ညာဘက်တွင် အိပ်စေခြင်း ၄။ စားသောက်သော အိုးခွက်ပန်းကန်များအား လွှင့်ပြစ်ခြင်း ၅။ ထမင်း ဟင်း ချက်ရင်း သီချင်း ဆိုခြင်း ၆။ နေဝင်ခါစ အချိန်တွင် အိပ်စက်ခြင်း ၇။ … Read more
ချစ်သူတိုင်း အချစ်တွေ ပိုတိုးလာစေမယ့် နည်းလမ်း (၁၅)မျိုး
ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူနဲ့ ချစ်သူဘ၀ကို ဒီထက်ပိုပြီး အဆင်ပြေချောမွေ့နေစေဖို့ ကအရေးကြီးပါတယ်။ အချိန်ကြာလာလေသွေးအေးသွားတာထက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အချိန်တွေပိုလာကြတာပိုကောင်းပါတယ်။ အဓိကက သင့်တို့ရဲ့ တစ်ယောက်အပေါ် တစ်ယောက်ထားရှိတဲ့ စိတ်ရင်းအတိုင်း လုပ်ပေးတာပိုထိရောက်ပါတယ်။ ဒီနည်းတွေကတော့ အချိန်လာလေ အချစ်တွေပိုတိုးလာစေမယ့်နည်းလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အနစ်နာခံပြီး ချစ်ပေးကြပါ။ (၂) ကိုယ့်ချစ်ရတဲ့သူအပေါ်ကို ဘယ်တော့မှ မလိမ်ပါနဲ့။ (၃) တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပေးကြပါ။ (၄) ချိုချိုသာသာပြောပေးရပါတယ်။ (၅) တစ်ယောက်ကအမှားလုပ်ရင်တောင် တစ်ကြိမ်တည်းဆို ခွင့်လွှတ်ပေးပြီး မေ့ပစ်ပေးလိုက်ပါ။ (၆) ရန်ဖြစ်ရင်တောင် လမ်းခွဲဖို့ ဘယ်တော့မှမပြောပါနဲ့။ (၇) တကယ်အဆင်မပြေဘဲ ၊ အဆင်ပြေပါတယ်လို့ မပြောပါနဲ့။ (၈) ချစ်သူတွေကြား မာနတွေမထားပါနဲ့။ (၉) အမှားလုပ်မိခဲ့ရင် စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ တောင်းပန်းပေးပါ။ (၁၀) ချစ်သူကို … Read more
လူပျိုစစ်မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင်
လူပျိုစစ်မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင် အမျိုးသားအားလုံးလိုလိုဟာ လူပျိုဘဝကို အစောကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်လို့ အများစုက ယူဆကြသည့်တိုင် အသက် ၂၅၊ ၃၀ ထိတောင် ဖိုမကိစ္စမစမ်းသပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတချို့ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ သူတို့လည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လူပျိုစစ်မစစ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်တချို့ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ခန့်မှန်းချက်တွေ လွဲကောင်းလွဲပါလိမ့်မယ်။ လူပျိုစစ်မစစ် သူသာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင် လူပျိုစစ်စစ်တွေ ပြုမူတတ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာတချို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာနဲ့ သူ့အချစ်ရေးအဆင်ပြေမှုရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတာကတော့ လုံးလုံးမသက်ဆိုင်ကြောင်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ဒီတော့ လူကောင်းဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာ သူ့အတွေ့အကြုံရှိမှု သို့မဟုတ် မရှိမှုပေါ် မူတည်ပြီးတော့ မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့။ မိမိတို့အချစ်ရေးဆက်ဆံမှုရဲ့ အနှစ်သာရကို အဓိကထားကြည့်ပါ…. ၁။ သင်နဲ့ … Read more
ခြေရှုပ်တတ်တဲ့ယောက်ျားတွေရဲ့လက်သုံးစကား ( ၁ဝ )ပါး
ခွရှေုပျတဲ့ယောကျြားတှရေဲ့လကျသုံးစကားမြား (သို့) ဂငျြးကွီး ၁ဝ ပါး ဗဒေငျမေးစရာ မလိုပါဘူး။ ဒီ ၁၀ ခှနျးကို အမွဲတမျးလိုလို ပွောနတေတျတယျ ဆိုရငျတော့ သခြောနပေါပွီ။ ၁။ အဲ့ကောငျမလေးက သူငယျခငျြးပါကှာ ဒီလိုစကားမြိုးဟာ သူကောငျမလေး တဈယောကျနဲ့ ပတျသကျနကွေောငျး သငျရှာဖှတှေေ့ ရှိသှားပွီး ဒါဘယျသူလဲလို့ မေးမှသာ ပွနျဖွတေဲ့စကားပါ။အမှနျတကယျ သူငယျခငျြးသာဆိုရငျ အဲ့ဒီကောငျမလေး အကွောငျးကို သငျအစောကွီးတညျးက သိနရေမှာပေါ့။အခုမှပျေါလာပွီး သံသယဖွဈစရာ အပွောအဆိုတှနေဲ့ ပတျသကျနကွေတဲ့ သူတို့နှဈယောကျဟာ အမှနျတကယျ သူငယျခငျြးတှေ ဖွဈတယျလို့ သငျယုံပါသလား။ယုံသငျ့တယျလို့ ထငျပါသလား။ ၂။ ကိုယျ့လှတျလပျခှငျ့ကို အလေးထားပါ၊ ကိုယျ့ဖုနျးကို မကိုငျနဲ့ မကွိုကျဘူး သငျမဟုတျတဲ့ တခွားမိနျးကလေးနဲ့ ပို့ထားတဲ့စာတှေ ၊ အဲ့ဒီမိနျးကလေးရဲ့ ပုံတှေ ရှိနတော သခြောသလောကျပါပဲ။အဲ့ဒီ မိနျးကလေးဆိုတာဟာ … Read more
14.1.2021 မှ 20.1.2021 အထိ (၇)ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ကံကြမ္မာဟောစာတမ်း
14.1.2021 မှ 20.1.2021 အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ ယခုကာလအတွင်းလုပ်ငန်းစီးပွားရေးတိုးတတ်လာဖွယ်ရှိနေပါတယ်။ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပခရီးကိစ္စများ အဆင်ပြေ ချောမွေ့နေမည်။ အလုပ်တွေများပြားနေတဲ့ကြားမှ တိုးတတ်အောင်မြင်မည်။ ယခင်ဖြစ်ပေါ်နေသော အခက် အခဲများကို ပြေလည်အောင် ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ စာရွက်စာတမ်းကိစ္စ၊စာချုပ်ကိစ္စ၊ အလုပ်အော်ဒါလက်ခံခြင်း ကိစ္စများ အောင် မြင်စွာ ဖြေရှင်းနိုင်မည်။ အလုပ်လျှောက်ထားသူများ၊အင်တာဗျူးဖြေထားသူများအလုပ်ရလာတတ်ပါတယ်။ တစ်ပါးသူလက်သို့ ရောက်ရှိ နေသော မိမိပိုင်ပစ္စည်းများ၊ မိသားစုပိုင်ပစ္စည်းများ လက်ဝယ် သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာနိုင်ပါသည်။ မိမိကိုဒုက္ခပေးနေသူများ သူ့အကုသိုလ်နဲ့သူဒုက္ခရောက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အမှုအခင်းဖြစ်လုဆဲဆဲ ကိစ္စများရှိနေရင်တော့ ပပျောက်သွားအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မည်။ သူများတွေရဲ့အလုပ်အကိုင်အဆင်မပြေမှုများ တတ်နိုင်သ၍ကူညီခွင့်တွေရလာတတ်ပါတယ်။ အမိအဖတွေကိုဒီကာလအတွင်းငွေကြေးထောက်ပံ့လာ နိုင်ပါလိမ့် မယ်။ မည်သည့်ကိစ္စကို ဆောင်ရွက် သည်ဖြစ်စေ ထူးခြား တိုးတတ်၊ အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်လိမ့်မည် ဖြစ် ပါသည်။ … Read more